Bokin'i Samoela - Howling Pixel
Ny anaran’ny boky
Amin’ny teny hebreo dia Sefer Shamuel no iantsoana io boky. Ny Septanta (na Septoaginta) no nanasaraka ny Bokin’i Samoela ho roa (tahaka ny Bokin'ny Mpanjaka koa) – ka ny boky tsirairay azo araka izany dia nataony hoe Bokin’ny Fanjakana. Ny Boky voalohany sy faharoan’i Samoela sy ny Boky voalohany sy faharoan’ny Mpanjaka dia natao hoe Boky voalohany ka hatramin’ny Boky fahefatry ny Fanjakana. Natao izany fizaràna izany satria ho lava loatra raha mbola nitambatra. Ny Samoela voalohany sy ny Samoela faharoa sy ny Mpanjaka voalohany ary ny Mpanjaka faharoa dia atao hoe Boky voalohany sy faharoa sy fahatelo ary fahefatry ny Fanjakana.
Ny fanoratana ny boky
Araka ny lovantsofina dia telo ny olona atao hoe nanoratra ny boky : i Samoela sy i Gada ary i Natana. Ny mpikarona momba ny Baiboly anefa dia milaza fa olona marobe no nanoratra ny boky.
Ny fotoana nanoratana
Araka ny fikarohan’ireo manam-pahaizana dia tsy tamin’ny fotoana mitohy iray fa tanatin’ny taonjato maro (faha-8 sy faha-7 ary fah-6 tal. J.K.) no naniratana ny boky.
Bokin'i Ezra sy i Nehemia
Bokin'ny Fanjakana (Baiboly)
Bokin'ny Fanjakàna no anarana iantsoana ireo boky efatra ao amin'ny Baiboly dia ny Boky voalohan'i Samoela hatramin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka ao amin'ny dikan-teny grikan'ny Testamenta Taloha atao hoe Septanta na Septoaginta. Ao amin'ny Septanta ny Boky voalohan'i Samoela dia atao hoe Boky voalohan'ny Fanjakana (grika: Α' Βασιλειών), ny Boky faharoan'i Samoela dia Boky faharoan'ny Fanjakana (grika: Β' Βασιλειών), ny Boky voalohan'ny Mpanjaka dia ny Boky fahatelon'ny Fanjakana (grika: Γ' Βασιλειών) ary ny Boky faharoan'ny Mpanjaka dia Boky fahefatry ny Fanjakana (grika: Δ' Βασιλειών).
Raha mbola tsy maty i Davida dia efa nisy tamin’ireo zanany no niady handimby azy nefa i Solomona ihany no voatendrin’i Davida handimby azy. Nanao fahotana lehibe i Solomona tamin'ny naha-mpanjaka azy ka ho setrin’izany dia nivaky roa ny firenena taorian’ny nahafatesany. Ny tapany avaratra dia natao hoe Fanjakan’i Joda fa ny ilany atsimo kosa dia natao hoe Fanjakan’i Israely (na Fanjakan’i Samaria). Ny mpanjaka tsirairay voatantara ao amin’ny boky dia tsaraina araka ny fifikirany na tsia amin’Andriamanitra.
I Ely dia mpitsara talohan'ny farany tao amin'i Israely araka ny Boky voalohan'i Samoela (1Samoela 7.15). Izy no nandimby an'i Samsona ary nodimbasan'i Samoela. Nisahana ny asan'ny atao hoe mpisoron-dehibe, mpisorom-be na mpisoronabe izy.
I Samoela dia sady mpaminany no mpitsara. Izy no farany amin'ireo mpitsara tao Israely nandimby an'i Ely. Atao hoe שְׁמוּאֶל / Shemūʼēl) izy amin'ny teny hebreo. Ny lovantsofina dia milaza fa izy no nanoratra ny Boky voalohany sy faharoan'i Samoela niaraka amin'i Gada sy i Natana. Niala amin'ny maha mpitsara azy izy tamin'ny nanosorany an'i Saoly ho mpanjaka, araka ny Boky voalohan'i Samoela (1Sam. 8-15) ary tapitra teo ny andron'ny mpitsara. Izy koa no nanosotra an'i Davida ho mpanjaka (1Sam. 16-31).
Ny Septoaginta na Septanta na Septoajinta izay hafohezina amin'ny tarehimarika romana hoe LXX (midika hoe "fitopolo"), dia dikan-tenin'ny Baiboly jiosy amin'ny fiteny grika koine. Niitatra ny zavatra tondroin'ny teny hoe Septoaginta ka nahafaoka ny ny dikan-tenin'ny Tanakh (Baiboly hebreo) manontolo fa tsy ny Torah ihany. Ny Jodaisma anefa tsy nandray ny Septoaginta fa nitoky tamin'ny Baiboly amin'ny teny hebreo ihany, sy amin'ny dikan-teny grika na arameana (Targoma) manakaiky kokoa ilay amin'ny teny hebreo.
Araka ny lovantsofina taterin'ny Taratasin’i Aristea tamin'ny taonjato faha-2 tal. J.K., ny fandikan-teny ny Torah, hono, dia notanterahin'ny mpandika teny miisa 72 tao Aleksandria, tokony ho tamin'ny taona 270 tal. J.K. araka ny fangatahan'i Ptolemaiosy II.
Mampiavaka ny Septoaginta amin'ny Tanakh ny fanoloana ny teny hebreo hoe יהוה‬ / Ihwh (ilay nogasina hoe Jehovah na Iahveh) ho Kύριος / Kúrios fotsiny amin'ny teny grika (izay midika hoe "Tompo").